We Broke Up အပိုင္​း ၉... - MIST - Myanmar Innercircle Subtitle Team - Download Facebook Videos
We Broke Up အပိုင္​း ၉... - MIST - Myanmar Innercircle Subtitle Team
MIST - Myanmar Innercircle Subtitle Team on Facebook Watch 11K Views
Download MP4 HD 119.72MB Download MP4 SD 15.32MB
<iframe width="600" height="350" src="https://e.bajarfb.com/1801998993375391" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
We Broke Up အပိုင္​း ၉
Special thank for shares.
JooYOONbal / Kang Seungyoon Bounce (Myanmar Sub) Original Artist Cho Yong Pil ယွန်းလေးရဲ့ KOMS King defended stage တွေက သူများနဲ့မတူ တကယ့်ကို ရသမျိုးစုံပေးစွမ်းနိုင်တာမို့ ပရိတ်သတ်တွေရော panelist ကပါ ဒီတစ်ခါ King က ဘယ်လိုသီချင်းလေးနဲ့ ပြိုင်ပွဲ၀င်မလဲဆိုတာ အရမ်းကိုစိတ်၀င်စားကြခဲ့သလိုပဲ King Stage တိုင်းမှာ ပရိတ်သတ်တွေ မျှော်လင့်ထားတာထက် အမြဲတမ...
MIST - Myanmar Innercircle Subtitle Team 394 views ·
JooYOONbal / Kang Seungyoon _ Blue Whale (Myanmar Sub) Original Artist _YB [ KOMS Stage ] ဒီ Blue Whale ဆိုတဲ့ သီချင်းလေးကတော့ အားပေးနှစ်သိမ့်ပေးတဲ့ သီချင်းလေးတစ်ပုဒ်ပါ။ လူရယ်လို့ဖြစ်လာရင် မဖြစ်မနေလျှောက်လှမ်းနေရတဲ့ ဘ၀ခရီးလမ်းမှာ ခက်ခဲပင်ပန်းပီး ရုန်းကန်ရစမြဲလေ ပျော်ရွှင်ရတဲ့ အခါ ရွိသလို ၀မ်းနည်းရတဲ့အခါလည်း ရှိမယ်။ အောင်မြင်မှု့တွေနဲ့အတူ ကျဆု...
MIST - Myanmar Innercircle Subtitle Team 711 views ·
JooYOONbal / Kang Seungyoon - Twenty_five, Twenty_one (Myanmar Sub) Original Artist – Jaurim ၂၅ ၂၁ နှစ်ဆယ်ကျော် အရွယ်က ဆုံတွေ့ခဲ့ ချစ်ခဲ့ရတဲ့ ချစ်သူကို တမ်းတလွမ်းဆွတ်စွာရေးဖွဲ့ထားတဲ့ သီချင်းလေးတစ်ပုဒ်ပါ။ ထာ၀ရရှိနေမယ်လို့ ထင်ယောင်မှားခဲ့တဲ့ အတိတ်နေ့ရက်တွေထဲက ချစ်သူရယ် ကိုယ်ရယ်ပျော်ရွှင်ခဲ့တဲ့ ပုံရိပ်လေးတွေကို အမှတ်ရစွာ ရေးဖွဲ့ထားတဲ့သီချင်းလေးမို...
MIST - Myanmar Innercircle Subtitle Team 566 views ·
Bow Wow - Mino (feat. YDG) Myanmar sub Bow Wow ကတော့ ထူးထူးခြားခြား Mino နဲ့ K Hip Hop လောကရဲ့ legendary YDG တို့ နှစ်ယောက်ရဲ့ အမိုက်စား collaboration ပါ။ YDG ဆိုတာ K Hip Hop နဲ့ ရင်းနှီးတဲ့သူတွေတင်မက SMTM ကြည့်ဖူးတဲ့သူတွေလဲ သိမှာပါ လူထူးလူဆန်း သူများနဲ့မတူတဲ့ စရိုက် အကြိုက်တွေနဲ့ သူ့သီချင်းတွေဆိုတာလဲ သူများတွေနဲ့ လုံးဝကိုခြားနားတာပါ။ တော်ရုံတန်ရ...
MIST - Myanmar Innercircle Subtitle Team 6.2K views ·
JooYoonBal - Lie Lie Lie (Myanmar Sub) Original Artist - Lee juck အစွန့်ပစ်ခံ ကလေးတွေ လူငယ်လေးတွေရဲ့ခံစားချက်ကို သီချင်းကတဆင့် ဖော်ပြခဲ့တဲ့သီချင်းလေးပါ... Emotional ဖြစ်ရတဲ့သီချင်းလေးကို ပြန်ဆိုတဲ့အခါ သုံးကြိမ်မြောက် King of masked singer ဖြစ်ခဲံပါပြီ .. တခေါက်လောက်ဖြစ်ဖြစ် နားထောင်စေချင်ပါတယ်.. 😍
MIST - Myanmar Innercircle Subtitle Team 946 views ·
Jooyoonbal - Drifting away (Myanmar sub) ကိုရီးယား ရဲ့ King of Masked Singer TV အစီအစဉ်မှာ ဟောင်ကောင်မင်းသားကြီး Chow Yun Fat စတိုင် (ကိုရီးယားလိုတော့ Joo Yoon Bal လို့ အသံဖလှယ်ပြီးခေါ်ပါတယ်) လောင်းကုတ်ရှည်ကြီးနဲ့ ကောင်လေးတစ်ယောက်ဟာ ပြိုင်ပွဲဝင်တွေကို အမှတ်အပြတ်အသတ်တွေနဲ့ အနိုင်ယူပြီး King အဖြစ် ၃ ပတ် ဆက်တိုက်အောင်ပွဲခံနေပါတယ်။ ပွဲရဲ့ထုံးစံအရ ရှုံ...
MIST - Myanmar Innercircle Subtitle Team 2K views ·
ဒီနေ့ကတော့ Winner ရဲ့အကြီးဆုံးအကိုကြိးရဲ့ enlistment day ဖြစ်ပါတယ်.. ညီလေးတွေ ကိုယ်တိုင် လေ့ကျင့်ရေးစခန်းထိလိုက်ပို့ခဲ့ကြပြီး နွေးနွေးထွေးထွေးနှုတ်ဆက်ခဲ့ကြတာပါ... (Inseo တွေကတော့ လူစုလူဝေးမလုပ်ဖို့ တားမြစ်ချက်ကြောင့် လိုက်နှုတ်ဆက်ခွင့်မရခဲ့ပေမယ့်ပေါ့နော်) စိတ်ချလက်ချနဲ့ နိုင်ငံတာဝန်ထမ်း​ဆောင်ရင်း ကျန်းကျန်းမာမာနဲ့ ပြန်လာခဲ့ပါ.. Inseo တွေအကုန်လုံးက စောင့်နေမှာပါ Jinwoo Oppa ရေ Come back safely And we'll be always waiting for you.. 💙
MIST - Myanmar Innercircle Subtitle Team 3.7K views ·
Jooyoonbal - Family potrait (Myanmar Sub) Original Artist - Kim Jin Ho KOMS မှာ ဒီသီချင်းလေးနဲ့ 3rd round ဖျော်ဖြေပြီး King ဖြစ်ခဲ့တာပါ.. မိသားစု သီချင်းလေးကို သားတယာက်အနေနဲ့ပြန်ဆိုထားတာပါ.. တကယ့် original song ကလဲ အရမ်းနာမည်ကြီးခဲ့တာမို့ ခက်ခဲပေမယ့် ကိုယ်တို့ ဒီန်ချဉ်တုံးလေးက ကောင်းကောင်း ဖျော်ဖြေခဲ့ပါတယ်..
MIST - Myanmar Innercircle Subtitle Team 651 views ·
WINNER - HOLD (ခ) သမ္း (ခ) Ddeum မနက္ျဖန္ အင္ဇိုးတို႔ရဲ႕ အကိုအႀကီးဆံုးေလး Kim Jinwoo စစ္မႈထမ္းဖို႔ စတင္ေတာ့မွာမို႔ Inseo ​ေတြမွာ တဖက္က ဂုဏ္ယူရသလို တဖက္ကလဲ ႏွစ္ႏွစ္နီးပါးခြဲခြာရမွာမို႔ စိတ္မေကာင္းျဖစ္ေနၾကမွန္းသိပါတယ္. . ဒါေၾကာင့္လဲ အဝူးေလး စစ္မႈမထမ္းခင္ အမွီ comeback အႀကိဳ Pre-release သီခ်င္းေလး Hold ကို Inseo ေတြလိုက္ဆိုႏို္င္ေအာင္ ႀကိဳးႀကိဳးစားစား ဘာသာျပန္ၿပီး MIST က အမွတ္တရ တင္ဆက္လိုက္ပါတယ္. . #HOLDWINNER
MIST - Myanmar Innercircle Subtitle Team 8.2K views ·